औद्योगिक वेंटिलेशन - एक प्रक्रिया जसको उद्देश्य कार्यस्थल मा हावा सहित कार्यस्थल मा प्राविधिक र सरसफाइको को उत्सव छ।
उद्देश्य र कार्यहरु
हावा विनिमय प्रक्रियाहरू को परिभाषा - डिजाइन र औद्योगिक वेंटिलेशन को स्थापना धेरै समस्या, मुख्य तिनीहरूलाई बीच समाधान। आवश्यक गणना पछि विशेषज्ञहरु उत्पादन, राशि र हानिकारक उत्सर्जन को प्रकृति लागि प्राविधिक प्रक्रिया अवस्था परिभाषित र यी डिजाइन डाटा वेंटिलेशन सिस्टम प्रतिबिम्बित।
आवश्यक डाटा अङ्कित लगभग असम्भव छ। धेरै नाटकहरु erudition र विशेषज्ञहरूको अनुभव: ईन्जिनियरहरु, डिजाइनर, र ईन्जिनियरहरु। कोठा गलत छ, तपाईं निकास हावा को मात्रा निर्धारण भने पनि सबैभन्दा महंगा र आधुनिक वेंटिलेशन इच्छित प्रभाव दिन छैन।
लागि उत्पादन सुविधाहरु को आवश्यक वेंटिलेशन के हो?
यसको मुख्य कार्य - उत्पादन कारखाना को कर्मचारीहरु लागि सहज अवस्था सुनिश्चित गर्न। साथै, दक्ष वेंटिलेशन धन्यवाद उत्पादन को एक विशेष प्रकारको आवश्यक वर्कफ्लोज र भण्डारण आवश्यकताहरु प्रदान गर्दछ।
यो इष्टतम अवस्था, उद्यम मा वेंटिलेशन सिस्टम प्रयोग बनाईएको हो अनुसार यस सेनेटरी स्तर संग छ। तिनीहरूले मात्र कार्यकर्ता को उत्पादन दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, तर पनि अस्वीकार दर कम, उत्पादन गुणस्तर सुधार।
उत्पादन मा हावा को वेंटिलेशन समयमा कोठा हटाइएको धूलो कणहरु र अतिरिक्त चिस्यान इष्टतम तापमान स्थापित छ। हावा मानव स्वास्थ्य को लागि हानिकारक, दहनशील विस्फोटक र सरल पदार्थ को साफ।
विनिर्माण जारी हानिकारक पदार्थ
औद्योगिक वेंटिलेशन र वातानुकूलन purified र पदार्थ को उत्पादन मा निष्प्रभावी विनियोजन नकारात्मक प्रभाव। उदाहरणका लागि, तिनीहरूले सफलतापूर्वक अत्यधिक heat- सामना र पानी स्वास्थ्य को लागि हानिकारक छन् कि toxins को एक किसिम सहित वाष्प वा महामण्डल फारममा पदार्थ हटाइएको छ।
राशि मा हावा विनियोजन धूलो कणहरु अधिकतम अनुज्ञेय मूल्य अधिक हुँदा औद्योगिक वेंटिलेशन, अत्यधिक धूलो स्पेस समस्या solves। एउटै धुवाँ र particulate पदार्थ को कण लागू हुन्छ। अन्तमा, उत्पादन प्रक्रिया हावा एक तुवालो जस्तै तरल को सानो कण मा केंद्रित वा खोक्रो ग्याँस बुलबुले को खस्छ छन्।
यी सबै "जोखिम" हावा द्वारा ओसारपसार छन्। एक समय रूपमा वेंटिलेशन सिस्टम र तापमान क्षेत्रहरू गठन, इच्छित हावा प्रवाह निर्धारण गर्छ। यसलाई स्थायी रूपमा बाहिर बाट प्रदूषित हावा मेटाउँछ र बाहिर शुद्ध सुन्दर हावा पम्प। एक विशेष चूषण उपकरण द्वारा यस्तो breathability।
डिजाइन र वेंटिलेशन को गणना
त्यसैले, औद्योगिक वेंटिलेशन सीधा दक्षता असर गर्छ। यसको सही गणना र कामकाज थुप्रै प्राविधिक प्रक्रियाहरू भर पर्छन्। तपाईं औद्योगिक वेंटिलेशन विशेषज्ञहरु को स्थापना लागू अघि त ध्यान दिएर कोठा मा तीव्रता र हावा नविकरण को आवृत्ति को गणना। यहाँ यस मामला मा कारक खातामा लिएको छौं।
उत्पादन क्षेत्र, यसको आकार र उचाइ;
डिजाइन सुविधा र वास्तुकला nuances;
एक औद्योगिक सुविधा को नियुक्ति;
राशि र हावा मा हानिकारक पदार्थ उत्पादन गर्ने बिरुवाहरु को प्रकार;
कोठा र आफ्नो रहन को अवधि मा रहछन कामदारहरूको संख्या;
उपकरण को टुक्रा र भीड को स्तर र अधिक संख्या।
औद्योगिक मास्को मा वेंटिलेशन र अन्य ठूलो शहर केही खास आवश्यकताहरू विषय, संगठित गरिएको छ। उदाहरणका लागि, 20 भन्दा कम वर्ग मीटर एक क्षेत्र संग एउटा सानो कोठामा, सफा हावा कम्तिमा 30 घन मीटर प्रति घण्टा प्रति व्यक्ति आपूर्ति हुनुपर्छ।
वेंटिलेशन सिस्टम मा उपकरण
हुड र आगमन: वेंटिलेशन प्रणाली, उपकरण को दुई मुख्य प्रकार छन्। को inflow - फोहोर हावा को हटाउन संडसी, वा निकास वेंटिलेशन उद्योग, र आपूर्ति सफा लागि पूरा गर्दछ। तिनीहरूले साथ वा अंधाधुंध या त संचालित गर्न सकिन्छ। तर, शुल्क को राशि र निकास हावा सधैं नै छ।
हावा उड्ने विधि आधारमा, औद्योगिक वेंटिलेशन यांत्रिक र प्राकृतिक विभाजित। उत्तरार्द्ध कारण विभिन्न दबाब र हावा कार्य गर्न, कोठा भित्र हावा प्राकृतिक आन्दोलन द्वारा गरिन्छ। यांत्रिक वेंटिलेशन, क्रमशः, प्रशंसक को एक सेट द्वारा संचालित छ।
प्रौद्योगिकी वेंटिलेशन प्रक्रियाको सुरक्षा सुधार गर्न, केही अवस्थामा, आपतकालीन वा जगेडा प्रणाली माउन्ट।
त्यसैले, औद्योगिक वेंटिलेशन plenum कोठा, सफा र बाहिर Blown देखि फिर्ता लिया फोहोर हावा प्रतिस्थापन गर्न गर्दछ। स्थानीय र सामान्य विनिमय: यो दुई प्रकार विभाजन गरिएको छ।
यो सिस्टम सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्रमा हावा सफा। यो संग, हावा मान सीमित गर्न हानिकारक पदार्थ पतला गर्न पर्याप्त रकम मा आपूर्ति गरिएको छ। हामी गर्मी बारेमा कुरा गर्दै भने, तापमान अतिरिक्त गर्मी रोक्न क्रममा सीमा कम छ।
यो एक स्पष्ट परिभाषित क्षेत्रमा विशिष्ट मापदण्डहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको छ। प्राविधिक, यो विशेष डिजाइन सहित को माध्यम द्वारा कार्यान्वयन गरिएको छ:
हावा पर्दा - फ्लैट हावा प्रवाह, एक निश्चित क्षेत्रमा हावा बाट हानिकारक पदार्थ को ingress रोकन;
हावा शवर - हावा को निर्देशित जेट, उदाहरण, औद्योगिक बिरूवा वा कामदारको लागि;
हावा उद्यानलाई - सफा हावा संग कोठा को एक निश्चित भाग भर्नको लागि एक प्रणाली।
यसरी, सामान्य विनिमय औद्योगिक वेंटिलेशन मात्र अतिरिक्त गर्मी neutralize र हावा मा हानिकारक पदार्थ को एकाग्रता कम गर्छ। उत्पादन प्रक्रिया भने सामान्य वेंटिलेशन आधारित हानिकारक ग्याँसहरु, vapors र धूलो मिश्रित प्रणाली को एक महत्वपूर्ण उत्सर्जन प्रयोग गरिन्छ, तर स्थानीय चूषण संग।
उच्च धूलो र ग्याँस उत्सर्जन संग उद्यम स्थापना सामान्य वेंटिलेशन सिस्टम सिफारिस गरिएको छैन। यस मामला मा, थप शक्तिशाली उपकरण, अधिक हानिकारक पदार्थ औद्योगिक परिसर मा फैलाउन छन्।
उद्योग मा प्रशंसक के हुन्?
आज प्रशंसक विभिन्न प्रकारका छन्। यहाँ मुख्य हुन्छन्।
Axial। को सबैभन्दा सामान्य प्रजाति आधुनिक कार्यस्थल। यसलाई स्थापित गर्न सकिँदैन मात्र होइन उद्योग तर पनि को सिस्टम मा घरेलू वेंटिलेशन। यो एकाइ को डिजाइन सबैलाई परिचित छ र ब्लेड संग केसिङ छ।
छत। नाम implies, यो पसलहरूमा, भंडारगृहों, र अन्य औद्योगिक उद्यम को छतों मा स्थापित छ। पनि आवासीय परिसर को वेंटिलेशन को सिस्टम प्रयोग गरिएको।
च्यानल। अक्सर प्रयोग कार्यालय छ, छत अन्तर्गत माउन्ट वा सीधा वेंटिलेशन वाहिनी गर्न, वाहिनी नेटवर्क मा माउन्ट।
सामान्य बाहेक, त्यहाँ विशेष कार्य संग प्रशंसक छन्।
ध्वनि। तिनीहरू पनि देखिने न्यूनतम प्रशंसक हल्ला निष्प्रभावी हुन एक कोठा मा राख्नु थिए। उदाहरणका लागि, अस्पताल वा पुस्तकालयहरु लागि।
Thermostable। प्लस 100 डिग्री गर्न माइनस 20 देखि - तिनीहरूले एक विस्तृत तापमान दायरामा काम गर्न सक्छन्। तिनीहरूले उच्च-बल सामाग्री बनेको र विशेष आगो प्रतिरोधी रंग ढाकिएको छन्।
विस्फोट। उद्यम जसको गतिविधिहरु विस्फोटक ग्याँसहरु को उत्पादन गर्न सम्बन्धित प्रयोग गरिएको। तिनीहरूले एक विशेष सामाग्री silumin बनेको हो, जंग-प्रतिरोधी र अत्यधिक टिकाऊ।
शत्रुतापूर्ण वातावरण गर्न प्रतिरोधी। रासायनिक बिरुवाहरु वा जहाँ रासायनिक आक्रामक पदार्थ एक महामण्डल अवस्थामा छैनन् प्रयोगशालाहरुमा लागि आवश्यक।
धुवाँ को हटाउनका लागि। यस्तो प्रशंसक अक्सर आपतकालीन वेंटिलेशन सिस्टम मा देखेको हो। तिनीहरूले प्रदूषित हावा हटाउने को कार्य र आगो देखि धुवाँ कम गर्न एक उत्कृष्ट काम गर्छन।
औद्योगिक वेंटिलेशन सिस्टम - कुनै पनि उत्पादन को एक महत्वपूर्ण भाग र तिनीहरूको डिजाइन र स्थापना योग्य पेशेवरों संलग्न हुनुपर्छ।
Demidov बिरुवाहरु: वर्णन, इतिहास, उत्पादन र समीक्षा
हरियो छत: लाभ र प्रकार
के किनारा बैंडिंग मिसिन किन्न? ब्रान्डहरु को अवलोकन
पृष्ठभूमि आविष्कार खुम्च्याउने उपकरण
अंग्रेजीमा असीम के हो, यसको कार्यहरू, रूपहरू र प्रयोगको आधारभूत नियमहरू
सबैभन्दा स्वादिष्ट केकडा सलाद।
बाट घर रजिस्टर निकाल्न
सद्भाव को देवी - प्रेम Slavonic
"Katahrom" - आँखा cataracts को उपचार को लागि खस्छ